Gamithromycin Asambodo - China NCPCVET
ọdịnala Chinese na nkà mmụta ọgwụ
Nso nso, NCPCVET merie ndị ọgwụ ọhụrụ asambodo maka mba abụọ-na klas ọhụrụ ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ drugs- "Gamithromycin" na "Gamithromycin ogwu ogbugba."
Gamithromycin bụ a akwụkwọ ọkara sịntetik macrolide ude. Ugbu a, tylosin na tilmicosin na-n'ọtụtụ ebe dị ka macrolides. Ọgwụ ndị a na-eji iji gbochie ma ọ bụ na-emeso akụkụ okuku ume na ọrịa na ehi na ezì. Ha na-emekarị nri na ngwa nri ma ọ bụ mmiri ọṅụṅụ. Mmetụta nke mgbochi ma ọ bụ ọgwụgwọ na-achọ multiple ụbọchị nke ugboro ugboro ochichi. Ọ bụ ezie na ọ na-enweta ezi ihe, ma na ndọtị nke eji oge, e nwere mgbanwe degrees nke ọgwụ na-eguzogide n'ọtụtụ ebe, na-abawanye na ego nke ọgwụgwọ a na-eji nwayọọ nwayọọ belata.
The ntụtụ gamithromycin mepụtara NCPCVET bụ a nkwadebe mere site agwakọta, prefiltering, akpali mmasị filtration, na aseptic ndochi. Ọ nwere ndị na-esonụ uru: First, a otu dose of subcutaneous / muscular injection Intramuscular ogwu ogbugba, otu ọgwụ nwere ike idozi nsogbu ahụ. The abụọ na-abụghị nanị na-eji gbochie ehi akụkụ okuku ume na ọrịa, ma na-kpọmkwem mmetụta nke akụkụ okuku ume na ọrịa na ezì. The atọ bụ ike ogologo oge mmetụta, ọ dịghị mmetụta, nrụpụta dị ike karịa tylosin, tilmicosin na ndị ọzọ na ọtụtụ-eji macrolide ọgwụ ọjọọ. The anọ bụ uru nke mbara antibacterial ụdịdị dị iche iche, ike antibacterial ọrụ, ngwa ngwa absorption, elu bioavailability, ala fọduru, na nchekwa na elu arụmọrụ.
Ihe ịga nke ọma ngwa nke ngwaahịa a ga-enyere ebuli ulo oru Ọdịdị nke China na ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ ọgwụ na ngwaahịa, n'ihu izute ahịa ina, ma welie ahịa competitiveness nke njem ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ ọgwụ ọjọọ.
Post oge: Jun-26-2018
Copyright © 2017 GOODAO.CN Edebere ikikere nile.